एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई निलम्बन गर्न सांसद यादवको माग
२०७७ जेठ २३ शुक्रबार १५:००:००
सांसद प्रदीप यादवले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले मधेसीमाथि गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निलम्बन गर्न माग गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले एन्फाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले तराई, मधेस, पहाडलाई टुक्रयाउने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
साथै शेर्पाले मधेसीलाई हेपेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यादवले आपत्ति पनि जनाए ।
उनले भने, ‘फुटबल संघका अध्यक्षले मधेसहरूलाई राष्ट्रियता आउँदैन, सिकाउनुपर्छ भन्नुभयो । त्यो पनि सेनामार्फत । मधेसीलाई राष्ट्रियता उहाँले सिकाउने हो ? मधेसीलाई राष्ट्रियता आउँदैन ? नेपाल फुटबल संघलाई हामी इज्जतले हेर्छौँ । यसरी मधेसीलाई हेप्ने ? मधेसीलाई होच्याउने ? यस्तो गलत अभिव्यक्ति दिने ? कर्माछिरिङ शेर्पाले कसको तागतमा बोल्नुभएको हो ?’
शेर्पाले सेनालाई समेत मुछेकोमा पनि यादवले आपत्ति जनाए ।
‘सेनालाई पनि मुछ्नुभएको छ । यो एउटा हाम्रो पवित्र संस्था हो । सेनालाई हामी मुटुमा राख्छौँ । कहिले पनि राजनीतिक विवादमा नआएको सेनालाई कर्माछिरिङ शेर्पाले यस्तो अभिव्यक्तिमा जोड्नुभएको छ । त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने शेर्पालाई तुरुन्त निलम्बन गर्नुपर्छ र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तराई, मधेस, पहाडलाई टुक्रयाउने कुरा गर्नुभएको छ । हामी अलग हाेइन । बोर्डरको रक्षा मधेसीले नै गर्छ । विनातलब, विना बर्दीको सिपाही हो हामी ।’
#एन्फा # माग # डिजिटल संस्करण
बुढानीलकण्ठ स्कुलले मागेको शुल्क स्थगित गर्‍यो
सिन्धुपाल्चोकमा आएकाे बाढीपहिरोबाट पीडित बनेकाहरूकाे छिटाे उद्धार गर्न देउवाको माग
एक्जिम कोड नवीकरणको म्याद थप्न नाडाको माग
गैरदलितले क्षमा मागौँ
प्राकृतिक विपदबाट पाँच वर्षमा दुई हजार एक सय १३ को मृत्यु, १५ अर्बको क्षति, मनसुनका २७ दिनमै ५६ जनाको मृत्यु